ရွေးချယ်လို့ အကောင်းဆုံး ဒေါ်လာ ၃၀၀ အောက် Windows Laptop ၇ မျိုး
13 Sep 2018 . 5:11 PM
ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဂိမ်းကစားချင်လို့ Laptop တစ်လုံးရှာနေတယ်၊ ဘယ်အမျိုးစားကောင်းပြီး ဈေးနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ဘာဝယ်ရမလဲ ဝေခွဲမရဖြစ်နေရင် အကောင်းဆုံး Budget Laptop ၇ လုံးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Lenovo Ideapad 320: Fully Recommend
Lenovo ထုတ် Ideapad တွေက အကြမ်းခံတယ်၊ ပေါ့လည်းပေ့ါတယ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်လည်းကောင်းတဲ့ အချက်တွေကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ Mainstream Laptop တမျိုးပါ။ ဒီ 320 မော်ဒယ်မှာဆိုရင် NumPad သီးသန့် ပါလာတဲ့အတွက် စာရင်းတွက်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ၊ နောက်ပြီး ၁၅.၆ လက်မ ရှိတဲ့အတွက် Screen ကြီးကြီးသုံးချင်သူအတွက်လည်း အံကိုက်ပါပဲ။ Resolution ကတော့ 1366×768 ရှိမယ်၊ USB 3.0 နဲ့ 2.0 ပေါက်တွေ ပါတယ်၊ Ethernet နဲ့ HDMI ပေါက်ပါသေးတဲ့အတွက် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရသေးတယ်၊ အဲ့ဒါထက် DVD Writer ပါပါသေးတာမလို့ တကူးတက External DVD Writer ဝယ်သုံးနေဖို့မလိုပါဘူး။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်း Microsoft Office နဲ့ တခြား Software ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တဲ့ အနေထား အပြည့်ဝရှိနေတယ်။ ဘာလို့လဲဆို Dual Core Chip အမျိုးစား Intel Celeron N3350 Processor ကို 4GB DDR3 RAM နဲ့ တွဲဖက်ထားလို့ပါ။ Graphics ကို Intel HD 500 သုံးပေးထားတာဆိုတော့ Entertainment အတွက် Ready ပါပဲ။ Hard Disk ကလည်း 1TB အထိ သိမ်းလို့ရတဲ့အတွက် လုံလောက်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒီလက်တော့ရဲ့ အားနည်းချက်တခုက တခြားမော်ဒယ်တွေထက်စာရင် ပိုထူတယ်၊ ပိုလေးတယ်၊ အလေးချိန် ၅ ပေါင်လောက်ရှိတယ်။ ဆက်တိုက်အသုံးပြုရင် ၄ နာရီလောက်ပဲ ဘက်ထရီခံမယ့် အားနည်းချက်လေးတော့ ရှိပါတယ်။
2. Asus Vivobook E403NA: Fully Recommend
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Asus Laptop တွေက ပေးရတဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အကြမ်းခံမှုတွေကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ Vivobook ဆိုတာလည်း Asus Laptop တွေထဲမှာ Budget ဖက်လည်း မရောက်၊ ဈေးလည်းမကြီးဘဲ Luxury ကျကျသုံးနိုင်တဲ့ မော်ဒယ်အမျိုးစားတခုပါ။ အပေါ်က Lenovo နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် Processor ၊ RAM နဲ့ Connectivity အားလုံး အတူတူပဲဆိုမယ့် Vivobook က Full HD Display ဖြစ်သွားပါပြီ။ Screen Size က ၁၄ လက်မပဲ ရှိတာဆိုတော့ နည်းနည်းသေးသွားတာပေါ့နော်၊ အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း NumPad ပါမလာတော့ပါဘူး။ ဒါမယ့် ရိုးရိုး HD ထက်စာရင် Resolution ပိုမြင့်သွားတဲ့အချက်က Pixel သိပ်သည်းဆ ပိုများလာမယ်၊ ရုပ်ထွက် ပိုကြည်သွားမယ်။ ဒါကြောင့် Display ကောင်း အရောင်ထွက်လည်း စိုပြေတဲ့တွက် Vivobook လေးက ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့တွက် အကောင်းဆုံး Budget လေးပါ။
နောက်ပြီး USB Type-C ပေါက် ပါသေးလို့ Type-C Device တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသေးတယ်။ GPU ကို Intel HD 500 ပဲ သုံးထားလို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဂိမ်းကစားဖို့တွက် အစဉ်ပြေပါတယ်။ ဒီလို Full HD Display လည်းပါ၊ ဘက်ထရီလည်း ၁၄ နာရီ လောက်ခံတယ်၊ Weight ၃ ပေါင်ပဲ လေးတဲ့ Vivobook အားနည်းချက်တခုက 64GB eMMC Storage ပဲ ပါလာတာပါ။ ဆိုတော့ Windows တင်လိုက်မယ်၊ လိုအပ်တဲ့ Software ပဲ သွင်းထားမယ်ဆိုရင်တောင် အများဆုံး 40GB လောက်ပဲ Usable ဖြစ်တာမလို့ 256GB Storage ရှိတဲ့ SD Card ဒါမှမဟုတ် External Hard Disk နဲ့ တွဲသုံးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
3. Lenovo 300E Convertible Laptop: Recommend
ဒေါ်လာ ၃၀၀ အောက် Budget တွေထဲမှာ Touchscreen ပါတာ ရှားပါတယ်၊ Laptop နဲ့ Tablet နှစ်မျိုးလုံး သုံးနိုင်တဲ့ Convertible အမျိုးစားထဲကဆိုရင် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၆၀၀ လောက်ပေးသုံးရမှာပါ။ ဒါကို Lenovo က တန်ဖိုးနည်း Convertible 300E မော်ဒယ်နဲ့ ခေတ်သစ်စံချိန် ချိုးပစ်လိုက်ပြီလို့ ပြောနိုင်ပါပြီ။ ဘာလို့လဲဆို Laptop နဲ့ Tablet နှစ်မျိုးလုံး သုံးနိုင်တယ်၊ ၁၁ လက်မ အရွယ်စားရှိ IPS Display ကိုမှ 1366×768 Resolution နဲ့ ထုတ်ထားတယ်။ Processor နဲ့ RAM တွေကလည်း လုပ်ငန်းသုံးဖို့နဲ့ ဂိမ်းကစားဖို့ Ready ဖြစ်နေတယ်။
Lenovo 300E Convertible
တခုပါပဲ သယ်လို့သွားလို့ ပိုအစဉ်ပြေသွားအောင် ထုတ်ထားတာဆိုတော့ ပလတ်စတစ် ကိုယ်ထည်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့အစ်ကို Yoga မော်ဒယ်လို Aluminum နဲ့ Magnesium သတ္တုလောက် မမာနိုင်ဘူး၊ Convertible လုပ်တဲ့အခါ သုံးထားတဲ့အထိန်းက မတော်တဆ ကျိုးပဲ့လွယ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မလို့ အဖွင့်၊ အပိတ်လုပ်ရင် ဖြစ်ဖြစ်၊ Tablet Mode ပြောင်းသုံးရင်ဖြစ်ဖြစ် ဂရုတစိုက် ကိုင်ရမယ့် အနေထားရှိပါတယ်။ အားမရစရာ နောက်တချက်က Asus လို 64GB eMMC Storage သုံးထားတယ်။ နောက်ပြီး ထူးထူးခြားခြား Windows 10 S ထည့်ထားတာဆိုတော့ Microsoft အပြင် တခြား Software သုံးမရတဲ့ Limitation တော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
4.Dell Inspiron 5000 Series i3552-4042BLK: Fully Recommend
Dell Laptop အများစုက ကောင်းမွန်တဲ့ TouchPad ပိုင်ဆိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး2Finger Multi-gesture Support လုပ်တာဆိုတော့ Mouse သပ်သပ် တပ်ထားစရာ မလိုတဲ့အထိ အစဉ်ပြေပြေ သုံးနိုင်တဲ့ အားသာချက်ရှိတယ်။ နောက်ပြီး တခြား Laptop တွေထက် အသံပိုစွာတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ Budget Dell မော်ဒယ်မှာတောင် MaxxAudio နည်းပညာ ပါလာလို့ပါ။
Dell Inspiron i3552
ဒီ Inspiron မော်ဒယ်မှာဆိုရင် 1366×768 Resolution ပါဝင်တဲ့ ၁၅.၆ လက်မ Display သုံးထားပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာ တခုက Asus မော်ဒယ်လို IPS Panel မဟုတ်တဲ့အတွက် Display Quality အသင့်တင့်ပဲ ရှိမှာပါ။ Processor ကို Intel Dual Core N3050 သုံးထားတယ်၊ RAM ကို 8GB အများဆုံး သုံးလို့ရတဲ့ အားသာချက်ရှိပြီး 4GB တခါထဲ ပါလာတယ်။ Storage ကို 500GB သုံးထားပြီး ထူးထူးခြားခြား ဘက်ထရီ ၆ နာရီခွဲလောက် သုံးလို့ရတဲ့ အားသာချက် ရှိနေပြန်တယ်။ အဆိုးရွားဆုံး အချက်တခုက ဒီ Dell ကို လှမ်းရှိုးလိုက်ရင် ခေတ်ဟောင်း Laptop ကြည့်နေရသလိုပါပဲ၊ ဖင်ထူကြီးနဲ့ ဘော်ဒီကြီးကလည်း အလေးကြီး၊ သူ့ Weight က ၇ ပေါင်ခွဲလောက် ရှိတာဆိုတော့ သယ်ရပြုရတဲ့ ဒုက္ခတော့ ရှိမှာပါ။
5. HP 15-BA009DX: Recommend
အမေရိကန် ထိပ်တန်း ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း တွေထဲက အထင်ကရ Hewlett-Packard (HP) ကတော့ အစဉ်လာနဲ့ကို နာမည်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ နောက်ပြီး Windows Laptop အားလုံးမှာ အထက်တန်း အကျဆုံး၊ Luxury Standard အရှိဆုံး Spectre လို Laptop မျိုးထုတ်နိုင်တဲ့အတွက် ထိပ်ဆုံးကလည်း ဦးဆောင်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဥရောပနဲ့ အာရှဈေးကွက်မှာ ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုး ရောင်းချနေတဲ့ တခြား Brand တွေကြောင့် Budget Laptop ချပြဖို့ လိုလာခဲ့ပါပြီ။ ဒါကို HP က ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ပဲ တန်ဖိုးနည်း Laptop တလုံးကိုမှ Quad Core Processor နဲ့ Graphics Card သပ်သပ်ပါတဲ့ HP 15-BA009DX ကို ချပြထားပါတယ်။
သူ့ Screen Size က ၁၅ လက်မခွဲ ရှိတယ်၊ ရိုးရိုး HD Resolution ပဲ သုံးထားပေမယ့် IPS နီးနီး ရုပ်ထွက်ကောင်းတယ်၊ AMD ရဲ့ A6 စီးရီး 7310U Processor ကို 4GB RAM နဲ့ တွဲဖက်ထားတယ်။ ဒီလို Quad Core Processor ကို Radeon R4 Graphics နဲ့ Run ထားတာကြောင့် DOTA2နဲ့ CS:GO ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်ဆိုင်လာတယ်။ ဒီလို AMD သုံးထားလို့ Intel လောက်မကောင်းဘူး မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆို နာမည်ပဲ ကျန်တော့တဲ့ Intel က အခုဆိုရင် AMD နည်းပညာနောက် အမှီ လိုက်နေရလို့ပါ။ ဆိုတော့ ဒီ HP လေးက ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးအတွက်သာမက တန်ဖိုးနည်း Budget လေးနဲ့ ဂိမ်းကစားနိုင်တဲ့ အားသာချက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သူ့ အားနည်းချက်လေးတွေက နည်းနည်းလေးတယ်၊ Graphics Card ပါလာတော့ ဘက်ထရီသိပ်မခံတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခုချိန် 1TB Storage က Standard လို ဖြစ်လာတဲ့အချိန် 500GB ပဲပါလာတာက မဆိုစလောက်နည်းနေတယ်လို့ ခံစားရစေပါတယ်။
6. Acer Aspire 1: Recommend
တရုတ်နိုင်ငံ Brand တမျိုးဖြစ်တဲ့ Acer မှာလည်း ရွေးချယ်စရာအချက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ထုတ်လိုက်တဲ့ Laptop အမျိုးစားတွေအလိုက် ပိုပါးလာအောင်၊ ဒီဇိုင်းပိုင်း ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် Acer ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချက်က ကမ္ဘာအပါးဆုံး Laptop အဖြစ် Swift7မော်ဒယ်တွေ အသတ်မှတ်ခံရတဲ့အထိ အောင်မြင်လာတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီပါ။ ဒီလိုပဲ Aspire 1 မှာဆိုရင်လည်း Upper Model တွေလို ပါးပါးလျပ်လျပ် ကိုယ်ထည်ကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
ဒီ ဒေါ်လာ ၃၀၀ တန် Aspire 1 အားသာချက်တခုက ၁၄ လက်မ Display မှာ Full HD Resolution ပါလာတယ်။ အပေါ်က Dual-core Celeron Chip တွေထဲမှာမ Quad Core N4000 Processor သုံးလာလို့ စွမ်းဆောင်ပိုကောင်းသွားတယ်။ RAM နဲ့ Storage မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း 4G RAM နဲ့ 64GB eMMC Storage ပဲ သုံးထားတာက အားမရာချင်စရာပါ။ နောက်ပြီး Budget ဆိုတော့ ကိုယ်ထည်က ပလတ်စတစ်သား ဖြစ်နေလို့ ဝယ်ပြီးသွားရင် အကြမ်းပတမ်း အသုံးမခံဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါ။ သူ့ Weight လေးက ၃ ပေါင်လောက်ပဲ လေးတဲ့အတွက် အပေါ် မော်ဒယ်တွေထက် ပို Portable ဆန်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာအချက်က Vivobook ကို မယှဉ်နိုင်တဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းပါ။ သုံးထားတဲ့ Quad Core Processor ကြောင့်လားမသိ Aspire 1 မော်ဒယ်က ဆက်တိုက်သုံးရင် ၆ နာရီပဲ ဘက်ထရီ အားခံပါတယ်။
7. HP 15-BS020WM 15.6″ Touchscreen Laptop: Editor’s Choice
ဒီ HP လေးက ဒေါ်လာ ၃၀၀ တန်ထဲမှာ စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံး၊ ဈေးလည်းအတန်ဆုံး Budget Laptop တလုံးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် 15.6″ Display ကို Touch Support ပေးထားတယ်၊ အားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Quad-core Pentium Processor သုံးထားတယ်။ RAM နဲ့ Storage ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း 4GB နဲ့ 500GB Hard Disk သုံးထားတာမလို့ ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးအတွက် ဒေတာသိမ်းဖို့ရော Office လို Application မျိုးနဲ့ တခြား Software Run ဖို့ ဘာအခက်ခဲမှ မရှိနိုင်ပါဘူး။
ဒီလို ပြည့်စုံနေတာကိုမှ Accu-Type Keyboad နဲ့ NumPad ပါသေးလို့ စာစီ၊ စာရိုက်တွက် အကောင်းဆုံး Budget လေးပါပဲ။ နောက်ပြီး Intel HD 630 Graphics သုံးထားလို့ DOTA2လို ဂိမ်းမျိုးကို 1366×768 Resolution မှာ Medium Setting နဲ့ ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်မယ်။ အဲ့ဒါထက် USB နဲ့ HDMI Port တွေအပြင် Memory Card Slot လည်းပါသေးလို့ ဘယ်လိုပဲ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရပါစေ၊ စိတ်အနှောက်ယှက် မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် DVD Writer လည်းပါသေးလို့ ဒီ HP လေးက ဈေးနှုန်းလည်းသင့် ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးအတွက် အကောင်းဆုံး Budget Laptop ဆိုရင်မမှားပါဘူး။
ရှေးခယျြလို့ အကောငျးဆုံး ဒျေါလာ ၃၀၀ အောကျ Windows Laptop ၇ မြိုး
ရုံးသုံး၊ ကြောငျးသုံးတှကျပဲဖွဈဖွဈ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဂိမျးကစားခငျြလို့ Laptop တဈလုံးရှာနတေယျ၊ ဘယျအမြိုးစားကောငျးပွီး ဈေးနဲ့ယှဉျလိုကျရငျ ဘာဝယျရမလဲ ဝခှေဲမရဖွဈနရေငျ အကောငျးဆုံး Budget Laptop ၇ လုံးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Lenovo ထုတျ Ideapad တှကေ အကွမျးခံတယျ၊ ပေါ့လညျးပေ့ါတယျ၊ စှမျးဆောငျရညျလညျးကောငျးတဲ့ အခကျြတှကွေောငျ့ လူကွိုကျမြားတဲ့ Mainstream Laptop တမြိုးပါ။ ဒီ 320 မျောဒယျမှာဆိုရငျ NumPad သီးသနျ့ ပါလာတဲ့အတှကျ စာရငျးတှကျဖို့ အဆငျသငျ့ပါပဲ၊ နောကျပွီး ၁၅.၆ လကျမ ရှိတဲ့အတှကျ Screen ကွီးကွီးသုံးခငျြသူအတှကျလညျး အံကိုကျပါပဲ။ Resolution ကတော့ 1366×768 ရှိမယျ၊ USB 3.0 နဲ့ 2.0 ပေါကျတှေ ပါတယျ၊ Ethernet နဲ့ HDMI ပေါကျပါသေးတဲ့အတှကျ လိုအပျသလို ခြိတျဆကျအသုံးပွုလို့ရသေးတယျ၊ အဲ့ဒါထကျ DVD Writer ပါပါသေးတာမလို့ တကူးတက External DVD Writer ဝယျသုံးနဖေို့မလိုပါဘူး။
စှမျးဆောငျရညျပိုငျးမှာလညျး Microsoft Office နဲ့ တခွား Software ကောငျးကောငျးသုံးနိုငျတဲ့ အနထေား အပွညျ့ဝရှိနတေယျ။ ဘာလို့လဲဆို Dual Core Chip အမြိုးစား Intel Celeron N3350 Processor ကို 4GB DDR3 RAM နဲ့ တှဲဖကျထားလို့ပါ။ Graphics ကို Intel HD 500 သုံးပေးထားတာဆိုတော့ Entertainment အတှကျ Ready ပါပဲ။ Hard Disk ကလညျး 1TB အထိ သိမျးလို့ရတဲ့အတှကျ လုံလောကျမှုရှိတယျလို့ ဆိုရပါမယျ။ ဒီလကျတော့ရဲ့ အားနညျးခကျြတခုက တခွားမျောဒယျတှထေကျစာရငျ ပိုထူတယျ၊ ပိုလေးတယျ၊ အလေးခြိနျ ၅ ပေါငျလောကျရှိတယျ။ ဆကျတိုကျအသုံးပွုရငျ ၄ နာရီလောကျပဲ ဘကျထရီခံမယျ့ အားနညျးခကျြလေးတော့ ရှိပါတယျ။
ထိုငျဝမျနိုငျငံ အခွစေိုကျ Asus Laptop တှကေ ပေးရတဲ့ တနျဖိုးနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ စှမျးဆောငျရညျနဲ့ အကွမျးခံမှုတှကွေောငျ့ နာမညျကွီးပါတယျ။ Vivobook ဆိုတာလညျး Asus Laptop တှထေဲမှာ Budget ဖကျလညျး မရောကျ၊ ဈေးလညျးမကွီးဘဲ Luxury ကကြသြုံးနိုငျတဲ့ မျောဒယျအမြိုးစားတခုပါ။ အပျေါက Lenovo နဲ့ ယှဉျလိုကျရငျ Processor ၊ RAM နဲ့ Connectivity အားလုံး အတူတူပဲဆိုမယျ့ Vivobook က Full HD Display ဖွဈသှားပါပွီ။ Screen Size က ၁၄ လကျမပဲ ရှိတာဆိုတော့ နညျးနညျးသေးသှားတာပေါ့နျော၊ အဲ့အတှကျကွောငျ့လညျး NumPad ပါမလာတော့ပါဘူး။ ဒါမယျ့ ရိုးရိုး HD ထကျစာရငျ Resolution ပိုမွငျ့သှားတဲ့အခကျြက Pixel သိပျသညျးဆ ပိုမြားလာမယျ၊ ရုပျထှကျ ပိုကွညျသှားမယျ။ ဒါကွောငျ့ Display ကောငျး အရောငျထှကျလညျး စိုပွတေဲ့တှကျ Vivobook လေးက ရုပျရှငျကွညျ့ဖို့တှကျ အကောငျးဆုံး Budget လေးပါ။
နောကျပွီး USB Type-C ပေါကျ ပါသေးလို့ Type-C Device တှနေဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျပါသေးတယျ။ GPU ကို Intel HD 500 ပဲ သုံးထားလို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဂိမျးကစားဖို့တှကျ အစဉျပွပေါတယျ။ ဒီလို Full HD Display လညျးပါ၊ ဘကျထရီလညျး ၁၄ နာရီ လောကျခံတယျ၊ Weight ၃ ပေါငျပဲ လေးတဲ့ Vivobook အားနညျးခကျြတခုက 64GB eMMC Storage ပဲ ပါလာတာပါ။ ဆိုတော့ Windows တငျလိုကျမယျ၊ လိုအပျတဲ့ Software ပဲ သှငျးထားမယျဆိုရငျတောငျ အမြားဆုံး 40GB လောကျပဲ Usable ဖွဈတာမလို့ 256GB Storage ရှိတဲ့ SD Card ဒါမှမဟုတျ External Hard Disk နဲ့ တှဲသုံးဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
ဒျေါလာ ၃၀၀ အောကျ Budget တှထေဲမှာ Touchscreen ပါတာ ရှားပါတယျ၊ Laptop နဲ့ Tablet နှဈမြိုးလုံး သုံးနိုငျတဲ့ Convertible အမြိုးစားထဲကဆိုရငျ အနညျးဆုံး ဒျေါလာ ၆၀၀ လောကျပေးသုံးရမှာပါ။ ဒါကို Lenovo က တနျဖိုးနညျး Convertible 300E မျောဒယျနဲ့ ခတျေသဈစံခြိနျ ခြိုးပဈလိုကျပွီလို့ ပွောနိုငျပါပွီ။ ဘာလို့လဲဆို Laptop နဲ့ Tablet နှဈမြိုးလုံး သုံးနိုငျတယျ၊ ၁၁ လကျမ အရှယျစားရှိ IPS Display ကိုမှ 1366×768 Resolution နဲ့ ထုတျထားတယျ။ Processor နဲ့ RAM တှကေလညျး လုပျငနျးသုံးဖို့နဲ့ ဂိမျးကစားဖို့ Ready ဖွဈနတေယျ။
တခုပါပဲ သယျလို့သှားလို့ ပိုအစဉျပွသှေားအောငျ ထုတျထားတာဆိုတော့ ပလတျစတဈ ကိုယျထညျဖွဈသှားတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ့အဈကို Yoga မျောဒယျလို Aluminum နဲ့ Magnesium သတ်တုလောကျ မမာနိုငျဘူး၊ Convertible လုပျတဲ့အခါ သုံးထားတဲ့အထိနျးက မတျောတဆ ကြိုးပဲ့လှယျတယျ၊ ဒါကွောငျ့မလို့ အဖှငျ့၊ အပိတျလုပျရငျ ဖွဈဖွဈ၊ Tablet Mode ပွောငျးသုံးရငျဖွဈဖွဈ ဂရုတစိုကျ ကိုငျရမယျ့ အနထေားရှိပါတယျ။ အားမရစရာ နောကျတခကျြက Asus လို 64GB eMMC Storage သုံးထားတယျ။ နောကျပွီး ထူးထူးခွားခွား Windows 10 S ထညျ့ထားတာဆိုတော့ Microsoft အပွငျ တခွား Software သုံးမရတဲ့ Limitation တော့ ရှိနိုငျပါတယျ။
Dell Laptop အမြားစုက ကောငျးမှနျတဲ့ TouchPad ပိုငျဆိုငျလရှေိ့ပါတယျ။ အနညျးဆုံး2Finger Multi-gesture Support လုပျတာဆိုတော့ Mouse သပျသပျ တပျထားစရာ မလိုတဲ့အထိ အစဉျပွပွေေ သုံးနိုငျတဲ့ အားသာခကျြရှိတယျ။ နောကျပွီး တခွား Laptop တှထေကျ အသံပိုစှာတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ Budget Dell မျောဒယျမှာတောငျ MaxxAudio နညျးပညာ ပါလာလို့ပါ။
ဒီ Inspiron မျောဒယျမှာဆိုရငျ 1366×768 Resolution ပါဝငျတဲ့ ၁၅.၆ လကျမ Display သုံးထားပါတယျ။ ဝမျးနညျးစရာ တခုက Asus မျောဒယျလို IPS Panel မဟုတျတဲ့အတှကျ Display Quality အသငျ့တငျ့ပဲ ရှိမှာပါ။ Processor ကို Intel Dual Core N3050 သုံးထားတယျ၊ RAM ကို 8GB အမြားဆုံး သုံးလို့ရတဲ့ အားသာခကျြရှိပွီး 4GB တခါထဲ ပါလာတယျ။ Storage ကို 500GB သုံးထားပွီး ထူးထူးခွားခွား ဘကျထရီ ၆ နာရီခှဲလောကျ သုံးလို့ရတဲ့ အားသာခကျြ ရှိနပွေနျတယျ။ အဆိုးရှားဆုံး အခကျြတခုက ဒီ Dell ကို လှမျးရှိုးလိုကျရငျ ခတျေဟောငျး Laptop ကွညျ့နရေသလိုပါပဲ၊ ဖငျထူကွီးနဲ့ ဘျောဒီကွီးကလညျး အလေးကွီး၊ သူ့ Weight က ၇ ပေါငျခှဲလောကျ ရှိတာဆိုတော့ သယျရပွုရတဲ့ ဒုက်ခတော့ ရှိမှာပါ။
အမရေိကနျ ထိပျတနျး ထုတျကုနျပစ်စညျး တှထေဲက အထငျကရ Hewlett-Packard (HP) ကတော့ အစဉျလာနဲ့ကို နာမညျရှိတဲ့ ကုမ်ပဏီပါ။ နောကျပွီး Windows Laptop အားလုံးမှာ အထကျတနျး အကဆြုံး၊ Luxury Standard အရှိဆုံး Spectre လို Laptop မြိုးထုတျနိုငျတဲ့အတှကျ ထိပျဆုံးကလညျး ဦးဆောငျနတောပါ။ ဒါပမေယျ့ ဥရောပနဲ့ အာရှဈေးကှကျမှာ ဈေးနှုနျးအမြိုးမြိုး ရောငျးခနြတေဲ့ တခွား Brand တှကွေောငျ့ Budget Laptop ခပြွဖို့ လိုလာခဲ့ပါပွီ။ ဒါကို HP က ပါးပါးနပျနပျနဲ့ပဲ တနျဖိုးနညျး Laptop တလုံးကိုမှ Quad Core Processor နဲ့ Graphics Card သပျသပျပါတဲ့ HP 15-BA009DX ကို ခပြွထားပါတယျ။
သူ့ Screen Size က ၁၅ လကျမခှဲ ရှိတယျ၊ ရိုးရိုး HD Resolution ပဲ သုံးထားပမေယျ့ IPS နီးနီး ရုပျထှကျကောငျးတယျ၊ AMD ရဲ့ A6 စီးရီး 7310U Processor ကို 4GB RAM နဲ့ တှဲဖကျထားတယျ။ ဒီလို Quad Core Processor ကို Radeon R4 Graphics နဲ့ Run ထားတာကွောငျ့ DOTA2နဲ့ CS:GO ကောငျးကောငျး ကစားနိုငျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ပိုငျဆိုငျလာတယျ။ ဒီလို AMD သုံးထားလို့ Intel လောကျမကောငျးဘူး မထငျလိုကျပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆို နာမညျပဲ ကနျြတော့တဲ့ Intel က အခုဆိုရငျ AMD နညျးပညာနောကျ အမှီ လိုကျနရေလို့ပါ။ ဆိုတော့ ဒီ HP လေးက ရုံးသုံး၊ ကြောငျးသုံးအတှကျသာမက တနျဖိုးနညျး Budget လေးနဲ့ ဂိမျးကစားနိုငျတဲ့ အားသာခကျြတှေ ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ သူ့ အားနညျးခကျြလေးတှကေ နညျးနညျးလေးတယျ၊ Graphics Card ပါလာတော့ ဘကျထရီသိပျမခံတာမြိုး ရှိနိုငျပါတယျ။ အခုခြိနျ 1TB Storage က Standard လို ဖွဈလာတဲ့အခြိနျ 500GB ပဲပါလာတာက မဆိုစလောကျနညျးနတေယျလို့ ခံစားရစပေါတယျ။
တရုတျနိုငျငံ Brand တမြိုးဖွဈတဲ့ Acer မှာလညျး ရှေးခယျြစရာအခကျြတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျးမှာ ထုတျလိုကျတဲ့ Laptop အမြိုးစားတှအေလိုကျ ပိုပါးလာအောငျ၊ ဒီဇိုငျးပိုငျး ပိုဆှဲဆောငျမှုရှိအောငျ Acer ပွောငျးလဲလိုကျတဲ့အခကျြက ကမ်ဘာအပါးဆုံး Laptop အဖွဈ Swift7မျောဒယျတှေ အသတျမှတျခံရတဲ့အထိ အောငျမွငျလာတဲ့ တရုတျကုမ်ပဏီပါ။ ဒီလိုပဲ Aspire 1 မှာဆိုရငျလညျး Upper Model တှလေို ပါးပါးလပျြလပျြ ကိုယျထညျကို စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ အစိတျပိုငျးတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားပါတယျ။
ဒီ ဒျေါလာ ၃၀၀ တနျ Aspire 1 အားသာခကျြတခုက ၁၄ လကျမ Display မှာ Full HD Resolution ပါလာတယျ။ အပျေါက Dual-core Celeron Chip တှထေဲမှာမ Quad Core N4000 Processor သုံးလာလို့ စှမျးဆောငျပိုကောငျးသှားတယျ။ RAM နဲ့ Storage မှာတော့ ထုံးစံအတိုငျး 4G RAM နဲ့ 64GB eMMC Storage ပဲ သုံးထားတာက အားမရာခငျြစရာပါ။ နောကျပွီး Budget ဆိုတော့ ကိုယျထညျက ပလတျစတဈသား ဖွဈနလေို့ ဝယျပွီးသှားရငျ အကွမျးပတမျး အသုံးမခံဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါ။ သူ့ Weight လေးက ၃ ပေါငျလောကျပဲ လေးတဲ့အတှကျ အပျေါ မျောဒယျတှထေကျ ပို Portable ဆနျပါတယျ။ စိတျမကောငျးစရာအခကျြက Vivobook ကို မယှဉျနိုငျတဲ့ ဘကျထရီသကျတမျးပါ။ သုံးထားတဲ့ Quad Core Processor ကွောငျ့လားမသိ Aspire 1 မျောဒယျက ဆကျတိုကျသုံးရငျ ၆ နာရီပဲ ဘကျထရီ အားခံပါတယျ။
ဒီ HP လေးက ဒျေါလာ ၃၀၀ တနျထဲမှာ စှမျးဆောငျရညျ အကောငျးဆုံး၊ ဈေးလညျးအတနျဆုံး Budget Laptop တလုံးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ 15.6″ Display ကို Touch Support ပေးထားတယျ၊ အားလုံးထဲမှာ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျရညျ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ Quad-core Pentium Processor သုံးထားတယျ။ RAM နဲ့ Storage ပိုငျးမှာဆိုရငျလညျး 4GB နဲ့ 500GB Hard Disk သုံးထားတာမလို့ ရုံးသုံး၊ ကြောငျးသုံးအတှကျ ဒတောသိမျးဖို့ရော Office လို Application မြိုးနဲ့ တခွား Software Run ဖို့ ဘာအခကျခဲမှ မရှိနိုငျပါဘူး။
ဒီလို ပွညျ့စုံနတောကိုမှ Accu-Type Keyboad နဲ့ NumPad ပါသေးလို့ စာစီ၊ စာရိုကျတှကျ အကောငျးဆုံး Budget လေးပါပဲ။ နောကျပွီး Intel HD 630 Graphics သုံးထားလို့ DOTA2လို ဂိမျးမြိုးကို 1366×768 Resolution မှာ Medium Setting နဲ့ ကောငျးကောငျး ကစားနိုငျမယျ။ အဲ့ဒါထကျ USB နဲ့ HDMI Port တှအေပွငျ Memory Card Slot လညျးပါသေးလို့ ဘယျလိုပဲ ခြိတျဆကျအသုံးပွုရပါစေ၊ စိတျအနှောကျယှကျ မရှိနိုငျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ DVD Writer လညျးပါသေးလို့ ဒီ HP လေးက ဈေးနှုနျးလညျးသငျ့ ရုံးသုံး၊ ကြောငျးသုံးအတှကျ အကောငျးဆုံး Budget Laptop ဆိုရငျမမှားပါဘူး။
by Zawyè . 34 mins ago